ऊँटसँग खिचिक्क सेल्फी ! – Saurahaonline.com
ऊँटसँग खिचिक्क सेल्फी !
सौराहा अनलाइन | २०७४, २८ पुष शुक्रबार
भरतपुर, पुस २८ । गैंडाकोट महोत्सव घुम्न आएका सन्तोष सुनारले ऊँटसँग खिचिक्क सेल्फी लिए । ऊँटले उनीसँग सजिलै गाला जोड्यो । सुनारले पटकपटक सेल्फी लिन भ्याए । उनीमात्र होइन, पहिलो दिन नवलपुरमा लागेको गैंडाकोट महोत्सवमा ऊँटसँग गाला जोडेर सेल्फी खिच्नेहरुको भीड नै थियो ।
गैंडाकोट महोत्सवले प्रमुख आकर्षणको रुपमा ऊँटको कलालाई राखेको छ । ऊँटले नाच्ने, हात मिलाउने, सलाम गर्ने, कुुकुरजसरी बस्नेलगायतका सात वटा कला देखाउँछ । महोत्सवको अवलोकनकर्ताहरु त्यही ऊँटको कलामा मख्ख पर्छन् ।
गाला जोडीजोडी सेल्फी लिन्छन् । ऊँट आफैँले गाला जोडेर सेल्फी खिच्न दिन्छ ।
बिजी गु्रपले गैंडाकोट महोत्सवमा बुुटवलबाट ऊँट ल्याएको हो । ‘महोत्सवमा हुने सेल्फी जोनको लागि बुटवलबाट ऊँट ल्याएका हौँ’ ऊँट चलाउने जीवन पंगेनीले भने । बिजी गु्रपले यसअघि गोर्खा, बागलुङ, प्यठान, रुकुम, रोल्पालगायतका ठाउँमा भएको महोत्सवमा ऊँटको कला देखाइसकेको छ ।
‘विभिन्न महोत्सवहरुमा ऊँटलाई दुई वर्षदेखि कला देखाउन लगिएको छ, गैंडाकोटको महोत्सव आठौँमा पर्छ’ बिजी गु्रपका प्रोपाइटर शिवलाल गौतमले भने, ‘राजस्थानबाट १० लाखमा ऊँट ल्याइएको हो ।’ उनले ऊँटको खानामा दिनको एक हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताए । उनले वैधानिक रुपमा नेपालमा ऊँटको कला देखाइएको बताए ।
गैंडाकोटको महोत्सवमा आकर्षकको रुपमा ल्याइएको ऊँट ४ वर्षको भाले ऊँट हो । ऊँटलाई तालिम दिएर कला देखाउन सक्ने बनाइएको प्रशिक्षकसमेत रहेका पंगेनीले भने । ‘सात प्रकारको कला देखाउन सक्ने बनाइएको छ, अन्य कला पनि सिकाउने सुरसारमा रहेका छौँ’ उनले भने ।
गैंडाकोट महोत्सव अवधिभर नै ऊँटको कला देखाइने छ । ‘ऊँट सँगसँगै महोत्सवमा आएका दर्शकहरु नाच्न सक्नेछन्, हात मिलाउन सक्नेछन्, सेल्फी खिच्न सक्नेछन्’ उनले भने ।